Dhismaha Qalabka Dhismaha Warshad - Shiinaha Qalabka Qalabka Dhismaha Soosaarayaasha, Alaab-qeybiyeyaal
Qalabka dhismaha OTR qar loogu talagalay soo saaraha Grader China OEM
Waxaan nahay alaab-qeybiyaha OEM ee magacyada waaweyn sida Caterpillar, Volvo, Liebherr, John Deere iyo XCMG. Waxaan sidoo kale u soo bandhigi karnaa geesaha Komatsu, Hitachi, Doosan, Bell iyo JCB. Alaabtayada HYWGQararka OTR inbadan ayaa loo isticmaalay arday badan oo fasal ah, kuwa xamuulka qaada, gawaarida xamuulka leh iyo gawaarida qashinka. Qarka OTR waa mid muhiim u ah gawaarida inta ay nool yihiin iyo waxtarka howlgalka, waa wax fiican Qarka OTR qaadi kara culeys aad u weyn wuxuuna ka caawin karaa gawaarida inay si habsami leh oo hufan u shaqeeyaan. Aad ayey muhiim ugu tahay gaariga OTR inuu lahaado mid xoogan, aamin ah laguna kalsoonaan karoQarka OTR. Alaabtayada HYWGQarka OTR waa xulasho wanaagsan milkiileyaasha gawaarida maxaa yeelay waxaan soo bandhignay tayo, qiimo wanaagsan iyo qarka buuxa ee geedaha inta badan gawaarida OTR.
Qalabka Qalabka Dhismaha OTR ee loogu talagalay soosaaraha Hauler China OEM soo saaraha
Qarka OTR sidaas darteed waxaa looga yeeray wadada dhinaceeda waa wareegga gawaarida loogu talagalay gawaarida wadada sida gawaarida gawaarida, gawaarida qashin-qubka, darajooyinka fasalka, dhajiyeyaasha qeexan, dozers iyo noocyada kale ee qalabka dhismaha, mashiinada macdanta iyo gawaarida warshadaha. Ku Qarka OTR waxaa si wada jir ah loola kaashanayaa taayirrada OTR si ay u qaadaan culeys ballaaran oo gawaarida ah uguna rogaan xaaladaha adag. Qarka OTR waa mid muhiim u ah gawaarida inta ay nool yihiin iyo waxtarka howlgalka, waa wax fiican Qarka OTR qaadi kara culeys aad u weyn wuxuuna ka caawin karaa gawaarida inay si habsami leh oo hufan u shaqeeyaan. Aad ayey muhiim ugu tahay gaariga OTR inuu lahaado mid xoogan, aamin ah laguna kalsoonaan karoQarka OTR. Alaabtayada HYWGQarka OTR waa xulasho wanaagsan milkiileyaasha gawaarida maxaa yeelay waxaan soo bandhignay tayo, qiimo wanaagsan iyo qarka buuxa ee geedaha inta badan gawaarida OTR. Waxaan nahay soo saaraha OIM ee magacyada waaweyn sida Caterpillar, Volvo, Liebherr, John Deere iyo XCMG. Waxaan sidoo kale u soo bandhigi karnaa geesaha Komatsu, Hitachi, Doosan, Bell iyo JCB.